▷ Laptọọpụ Toshiba (Dynabook) kacha mma nke 2022
Toshiba bụ ihe ọzọ dị mma teknụzụ na ngwá electronic. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ Japan anọwo na ndò nke nnukwu ụlọ ọrụ ndị ọzọ riri ala, dịka Samsung, Apple, Xiaomi, wdg. N'aka nke ọzọ, anyị agaghị echefu àgwà na ihe ọhụrụ nke ngwaahịa ya, na mgbakwunye na ọtụtụ ihe mmepụta ihe na patent nke enwetara ekele maka ụlọ ọrụ a, dị ka ndị na-emepụta NAND flash memory nke a na-eji ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka. na SSD, nwere ụfọdụ draịva siri ike a pụrụ ịdabere na ya, yana ịbụ ndị ọsụ ụzọ n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ ...
Ụlọ ọrụ a nwekwara ahịa maka obere akụrụngwa, na ha nwere ike ịnwe atụmatụ na-amasị ụfọdụ ndị ọrụ na-achọ ogo dị elu nke nguzogide, ịdịte aka na ike n'ikpeazụ, inye ya agha.
IHEAgbanyeghi na a ka nwere otutu okwu banyere Toshiba laptops ma a ka nwere udiri maka ire ere, nke bu eziokwu bu na kemgbe afo 2020 nkewa nke laptops ulo oru a aburula nke Sharp, nke a buterela akara Toshiba nke laptops ugbua na-akpo ya. Dynabook.
1 Laptọọpụ Toshiba kacha mma
2 Toshiba laptọọpụ nso
3 Uru nke Toshiba laptọọpụ
4 Toshiba ọ bụ ezigbo akara laptop?
5 Kedu ihe kpatara na-ahụta laptọọpụ Toshiba karịa na azụmaahịa yana obere n'ụlọ?
6 Laptọọpụ Toshiba ọ bara uru? Echiche m
Laptọọpụ Toshiba kacha mma
Nke a bụ nhọrọ nke laptọọpụ Dynabook (Toshiba) kacha ewu ewu maka uru ha bara maka ego:
Toshiba laptọọpụ nso
N'ime ika Toshiba ị nwere ike ịzụta usoro dị iche iche ụdị nke emebere iji meju onye ahịa dị iche:
Ọ bụ ahịrị emebere nke ọma maka azụmahịa na gburugburu ebe ọkachamara. Ha nwere akụrụngwa akụrụngwa nwere arụmọrụ dị mma. Emechara dị na rọba, yana ibu dịtụ elu, na-ebu ihuenyo 14 ”na 15.6”. Nke a bụ oke ọnụ ala.
Yiri nke gara aga n'ọtụtụ nkọwa, mana ọ dị iche na ịnwe ọnụ ahịa dị ntakịrị karịa, yana chassis magnesium alloy, yana obere ihuenyo dị ntakịrị, 11.6 "na 13.3". Banyere ọnụahịa, ọ dị ntakịrị elu karịa nke gara aga, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ukwuu.
Nke a nso bụ otu n'ime ndị kacha ere. Ọnụ ahịa ha na-agbanwe nke ukwuu, dabere na ụdị ahọpụtara. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere usoro C-Series, L-Series, P-Series, S-Series, E-Series, Radius-Series, na Pro, site na nke dị ọnụ ala na nke kachasị ike ruo na nke kachasị ọnụ na ike. Na mgbakwunye, usoro Radius na-agbanwe agbanwe, yana ihuenyo nwere ike ịtụgharị ogo 360.
Ha na-enyekwa naanị ngwaahịa dị elu emebere maka ndị na-azụ ahịa na-achọ okomoko. Ewubere ya maka egwuregwu egwuregwu na imepụta ọtụtụ mgbasa ozi, yana ọnụego oriri dị egwu. Ha dị ọnụ ala karịa Kira, mana ọ dịkwa oke ọnụ.
Ha anaghị ewu ewu nke ukwuu, mana ọ bụ ụdị Toshiba ultraportables ezubere maka okomoko. Site n'ichepụta nke ọma, nnukwu ngagharị, nnwere onwe na arụmọrụ dị egwu. N'ezie, ndị a bụ ndị kasị ọnụ.
Toshiba na-emekwa Chromebooks, ya na sistemụ arụmọrụ Google ChromeOS. Sistemu eji arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, echekwara ma sie ike, nwere ikike ịkwado ngwa ọdịnala Android, yana yana njikọta zuru oke nke ọrụ igwe ojii. Ọ bụ ezie na ngwaike ha abụghị nke kachasị ike, e mere ha iji nye obere oriri na ogologo ndụ batrị. Na ọnụahịa ya dị oke ọnụ ahịa, nke na-eme ka ọ dị mma maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ na-achọ ihe bụ isi.
Uru nke Toshiba laptọọpụ
Laptọọpụ Toshiba abụghị ndị na-ere ahịa kacha mma, ọ bụghịkwa ha kacha mara nke ọma maka ndị ọrụ. Kama nke ahụ, ha nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ihi na ha na-elekọta ụfọdụ mgbe nile nkọwa na-apụta ìhè karịsịa:
Nguzogide: ngwá ọrụ ndị a bụ ndị a maara nke ọma maka ụdị mgbakọ na àgwà nke njedebe na-eme ka ha na-eguzogide ọgwụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ akụrụngwa na-adịgide adịgide, nke a nwere ike ịbụ nnukwu ịzụrụ.
NweghachiỌ bụ ezie na ọtụtụ ụdị na-ejikọta ihe niile, na ihe ndị welded, yana ịnweta ohere maka ịrụzi, Toshiba chọrọ imeju ndị na-agbapụ na nke ahụ, na ụlọ ọrụ niile iji dochie ụfọdụ akụkụ ya.
Ọnụahịa mma: Ha na-apụtakwa maka inwe ezi mmekọrịta n'etiti ọnụahịa, karịsịa na Satellite nso, na àgwà.
Ụfọdụ àgwà na-eme ka ha dị mma karịsịa maka gburugburu azụmahịa na ọrụ ebe ha nwere ike ịdaba ma ọ bụ nwee ụdị ihe mberede ...
Toshiba ọ bụ ezigbo akara laptop?
Ee, Toshiba bụ a nnukwu ika nke laptọọpụ, dị ka Sony, Samsung, Xiaomi, ASUS, Lenovo, Huawei, wdg. Ihe kachasị mma banyere ngwá ọrụ ndị a bụ àgwà na ọnụahịa, yana gụnyere ndị ọhụrụ na ngwaike, na njikọ aka na isi ụdị na ngalaba, na na-eguzogide na mfe nke mmezi nke ga-azọpụta gị ego na azụmahịa gburugburu.
Kedu ihe kpatara na-ahụta laptọọpụ Toshiba karịa na azụmaahịa yana obere n'ụlọ?
Toshiba bụ akara nke chọrọ ilekwasị anya n'ahịa a chọrọ ụlọ ọrụ ahụ maka laptọọpụ ha, ọ bụ ezie na ha dịkwa maka ndị ọrụ ụlọ na-achọ ịzụrụ otu. Otú ọ dị, ha na-emekarị na ụlọ ọrụ n'ihi uru ndị otu ndị a na-agbakwụnye na ụdị gburugburu ebe a.
Su ọrụaka ọrụ Ọ bụkwa otu n'ime ike ya, ihe ụlọ ọrụ na-achọ ka e kpuchie ya nke ọma mgbe ihe mere.
Laptọọpụ Toshiba ọ bara uru? Echiche m
Ọ bụrụ na ị na-adịghị na-achọ a Ịgba Cha Cha laptọọpụ, ma ọ bụ nnọọ elu arụmọrụ, na ị chọrọ nnọọ a ezigbo laptọọpụ, dị ọnụ ala, ma wuo agha, ka ọ dịgide, na imezi ya ngwa ngwa, mgbe ahụ Toshiba bara uru.
Ya mere na ị nwekwara ike inyocha ma ọ bụrụ na ọ bara uru na gị akpan akpan ikpe ma ọ bụ, ị kwesịrị ị mara na uru na ọghọm kacha mara amara n'ime ụdị ndị a:
Anwụ ngwa ngwa: ha bụ ụdị ndị e mere maka ogologo ndụ na ndị ọkachamara. Na ezigbo nrụzi ike.
Banyere anyị: Ụlọ ọrụ a na-enye ezigbo ọrụ nkwado ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha, nke dịkwa mkpa maka azụmahịa na gburugburu ebe ndị ahịa.
Onwe ya- Ndụ batrị mara mma nke ukwuu, yabụ na ịgaghị mkpa ịgbanwe ntọala arụmọrụ iji chekwaa ma ọ bụ na-ana ya mgbe niile.
Ahịa: Ọnụ ego / ogo dị mma nke ukwuu, ọ nwere ike inye gị laptọọpụ dị mma nke nwere ezigbo arụmọrụ na-etinyeghị ego buru ibu.
Akwụkwọ ikike na nkwado: Ọrụ nka nke Toshiba nwere ezigbo ndị ọkachamara na aha ọma, yana ịnye oke nkwa.
Imebe: Ha abụghị kpọmkwem laptọọpụ kachasị mma na nke mara mma, ma nke a abụghị ihe dị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ, karịsịa na ụlọ ọrụ.
Innovation: ìgwè ndị a enweghị nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ, e mere ha ka ha dị irè, na-enye ọrụ dị mma, na-eguzogide ọgwụ.
software- Ị nwere ike ịnwe ngwa arụnyere mbụ nke ị na-achọghị.
N'ezie, ndị Sharp azụmahịa ketara uru na ọghọm ndị a, onye nwe ugbu a nke ngalaba Laptọọpụ Toshiba, ma na-ere ya ugbu a n'okpuru ụlọ ọrụ. Ụdị Dynabook.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Akwụkwọ ndetu Toshiba Dynabook